Delicious eyosiwe inkukhu kuso kungaba fast ngokwanele. Kodwa kule isidlo isibe elimnandi kakhulu futhi ukunambitheka ekhethekile izinkukhu inyama Kunconywa ukuba banezela izinongo, seasonings, futhi noma iyiphi imifino.
Indlela ukupheka inkukhu kuso 1 ihora nje
encane garlic fresh - 3 clove;
onion naphakathi - 4 PC.
lonke inyoni inkukhu - 1 pc.
amanzi okuphuza - 2 izinkomishi;
usawoti naphakathi - spoon elincane;
emnyama - schepotochka;
Fresh isanqante big - 1 pc.
dill, parsley, amalikhi - ngesicelo;
utamatisi unama - 3 nezinkezo encane.
Ukucutshungulwa umkhiqizo inyama:
Ngaphambi indlela ukupheka inkukhu kuso, qiniseka aphathe yonke ayobona isidumbu abasha. Kudingeka ukugeza kahle, bese uthathe izingxenye ezincane (amabele, amathanga, imilenze, amaphiko, nokunye. D.). Ngemva kwalokho, inyama Kunconywa ukususa zonke izakhi ezingadingekile ngesimo amafilimu ahlukahlukene, umthambo, izimbali, isikhumba, njll, Bese engahashazanga futhi ukuqala ukuthosa.
Ukuze baqonde indlela ukupheka inkukhu kuso, kubalulekile ukulandela umthetho main ekuphekeni, othi noma iyiphi inyama nokwelashwa ukushisa liyadingeka qinisekisa ukungeza elimnandi namakha, seasonings nemifino. Ngakho, kufanele kuthathe ambalwa naphakathi anyanisi kanye isanqante fresh esikhulu, bese kugeze emanzini, ikhasi nquma ku cubes. Futhi kubalulekile ukuba geza nquma ngommese parsley, leek kanye dill.
ukwelashwa ukushisa, noma indlela ukupheka inkukhu kuso
Uma zonke izithako eziyisisekelo alunge, kufanele aqhubeke ngokushesha yokuwugazinga yabo. Kuze kube yimanje, i-imibengo inkukhu isidumbu kumele ufake epanini, ukunambitheka ithebula usawoti bese uthele ezimbili izinkomishi zamanzi okuphuza. Okulandelayo, kudingeka alethe umhluzi ukuze ngamathumba futhi ukunciphisa ukushisa kancane bese upheka inyama kuze kube yilesi sikhathi, kuze ketshezi uye ayahwamuka. Phakathi nalesi sikhathi, inkukhu fat zaphela amandla, le nyoni uzobe ethosiwe in juice yabo. Kuyadingeka ukuqinisekisa ukuthi inyama hhayi wokushiswa, futhi kuphela kancane embozwe uqweqwe sinombala.
Ngemuva kancane inkukhu gazinga, kufanele babeka onion kanye izaqathe kanye spoonfuls ambalwa utamatisi unama. Ngokulandelayo, pan ne isidlo kumelwe ubamba cishe imizuzu engu-25-28 phezu emlilweni ophansi. Khona-ke inyama Kunconywa ukwengeza oqoshiwe leek, dill, iparsley yashizi ugarliki. Hlanganisa zonke izithako ndawonye, ngakho kufanele basuswe lapho amapuleti labuye lanwetshwa ngo izitsha portioned.
Ukuze inkukhu esihlwabusayo epanini ugcwalise wena obathandayo, kufanele wakhonza eyodla amazambane Hlobisa. Ukuze wenze lokhu, nezilimo eziyizigaxa ehlutshiwe, imifino kufanele zifakwe emanzini anosawoti bese bahlanganise ubisi, ibhotela kanye inkukhu neqanda. Kungenzeka futhi ukwenza Isidlo parsley fresh, ulethisi, ukhukhamba, anyanisi notamatisi, okuyinto oyifunayo ukugcwalisa ukhilimu obukhulu noma imayonnaise okunama-kilojoule amaningi.
Apricot ujamu. izakhiwo awusizo izithelo kanye zokupheka
Molva - izinhlanzi kwamaholidi kanye kwansuku zonke. zokupheka esihlwabusayo
Indlela ukupheka yenkomo inhliziyo: zokupheka okumnandi for offal
Esakhelwe ngaphakathi ayina ebhodi. Izinhlobo kanye izici onobuhle
Flex Animal. Izibuyekezo abasubathi
Amanani wokuguqulwa: uhlu yokulinganisela, isivuno
Veronica Franco, a courtesan futhi imbongi: Biography
Zingaki izinsuku uzothola umkhuhlane? Zingaki izinsuku kokuthola umkhuhlane?
Kungaba iphutha sokukhulelwa ukuhlolwa? Izizathu Imiphumela ayilungile
Playing The Evil Within: indaba futhi kafushane.
Yini amatshe ukulingana Taurus uphawu?
Stamp komsebenzi ukwenza i-passport - nini futhi kungakanani ukukhokhela?